Baahin: Axad, May 29, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Madax ka tirsan maamulada Somaliya oo ka qayb galay shirar lagu darsay daryeelka xuquuq al insaanka ee Somaliya; Marwo Caasha Geelle Diiriye oo ka qayb gashay shirarka ayaa waraysanay … Ka-qaybgalkii Somaliland ee shirkii Nairobi; Wasiirka arrimaha dibedda ee Somaliland Maxamed C/llahi Cumar ayaan waraysanay … C/risaaq Cabdulle Geesood, wasiirkii hore ee Cadaalada ee Puntland oo lagu eedeeyey in uu dhaqdhaqaaq siyaasadeed ka wado Galdogob; Geesood oo taa beeniyey ayaan waraysanay … Kalluumaysatada maxalliga ah oo khaati ka taagan maraakiibta jariifka ee sida sharci darrada ah uga ugaadhata xeebaha Somaliya; Siciid Antena, Duqa degmada Bander Bayla ayaa waraysanay … – Radio Daljir
Baahin: Axad, May 29, Weriye C/fitaax C. Geedi ~ Daljir ~ Galkacyo. Madax ka tirsan maamulada Somaliya oo ka qayb galay shirar lagu darsay daryeelka xuquuq al insaanka ee Somaliya; Marwo Caasha Geelle Diiriye oo ka qayb gashay shirarka ayaa waraysanay … Ka-qaybgalkii Somaliland ee shirkii Nairobi; Wasiirka arrimaha dibedda ee Somaliland Maxamed C/llahi Cumar ayaan waraysanay … C/risaaq Cabdulle Geesood, wasiirkii hore ee Cadaalada ee Puntland oo lagu eedeeyey in uu dhaqdhaqaaq siyaasadeed ka wado Galdogob; Geesood oo taa beeniyey ayaan waraysanay … Kalluumaysatada maxalliga ah oo khaati ka taagan maraakiibta jariifka ee sida sharci darrada ah uga ugaadhata xeebaha Somaliya; Siciid Antena, Duqa degmada Bander Bayla ayaa waraysanay …